NLD အစိုးရ ကလေးအလုပ်သမားတွေ ပပျောက်ဖို့ ကာလရှည် ၁၅ စီမံကိန်း ချမှတ် ဆောင်ရွက်မယ် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း NLD အစိုးရ ကလေးအလုပ်သမားတွေ ပပျောက်ဖို့ ကာလရှည် ၁၅ စီမံကိန်း ချမှတ် ဆောင်ရွက်မယ်
epa02242020 A photo made available on 09 July 2010 shows refugee child from Myanmar (Burma) Wai Yan Kyaw, 7, look for rubbish to sell to recyclers inagiant garbage dump on the outskirts of Mae Sot, in north west Thailand, 06 July 2010. About two-hundred people, among them 80 families of refugees scrape meagre funds from the garbage dump earning 30 to 50 Thai baht (0.9 - 1.5 US dollars or 0.7 - 1.2 euro) per day. In this area along the Thai Myanmar border, about 140,000 refugees fromavariety of ethnic minorities fleeing the ongoing insecurity in Myanmar, live in nine different camps, forming the largest refugee population in Southeast Asia. While resettlement inathird country is an option foralimited number, for those who remain behind the future looks uncertain. EPA/NARONG SANGNAK
NLD အစိုးရ ကလေးအလုပ်သမားတွေ ပပျောက်ဖို့ ကာလရှည် ၁၅ စီမံကိန်း ချမှတ် ဆောင်ရွက်မယ်
ကလေးအလုပ်သမားတွေ ပပျောက်ဖို့ ကာလရှည် ၁၅ စီမံကိန်း ချမှတ် ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ NLD အစိုးရက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
သတင်းဓာတ်ပုံ – NARONG SANGNAK (EPA)
မေလ ၂၉ ရက်နေ့က အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၈) က ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အိအိပြုံးရဲ့ ကလေးလုပ်သားတွေလျှော့ချနိုင်ရေးနဲ့ အသက်မွေးပညာ သင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မေခွန်းကို ဖြေကြားရာမှာ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေက ပြောကြားလိုက်တာပါ။
ဒီလိုပြောကြားရာမှာတော့ အစိုးရအနေနဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကနေ စတင်ကာ ၂၀၃၃ ခုနှစ်အထိ ၁၅ နှစ်တာ ကလေးအလုပ်သမားဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို ချမှတ်ပြီး ကာလတို စီမံကိန်းတွေ ၅ နှစ် တစ်ကြိမ်ချမှတ်ကာ ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ပြောကြားခဲ့တာပါ။
ဒါအပြင် အစိုးရအနေနဲ့ လက်ရှိအခြေအနေမှာလည်း ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းကျောင်းတွေမှာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်တွေကို သင်ကြားပေးနေတယ်လို့လည်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Previous articleနိုင်ငံခြားသားလက်မှတ်ကို အရင်စွန့်လွှတ်စရာမလိုပဲ နိုင်ငံသား လျှောက်ထားနိုင်
Next article၁၀ လ အတွင်း တရားမ၀င် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု ၆၀၀ ကျော်ကို ဖော်ထုတ်အရေးယူ